यी ठूला घरानीयालाई कसले तह लगाउने ? - यी ठूला घरानीयालाई कसले तह लगाउने ?
नेपालबहस संवाददाता २०७४, २८ पुष 136 Views
२८ पुस, काठमाडौं । निजी तथा सरकारी निकायले नै स्थानीय तहलाई तिर्नुपर्ने करोडौं रुपैयाँ नतिर्दा मुलुकका कतिपय स्थानीय तहको वार्षिक राजस्व लक्ष्य नै असफल बन्ने देखिएको छ ।
एकातिर बहाल करमाथि अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप र अर्कोतिर घरबहाल करदाताले समेत कर तिर्न आनाकानी गर्दा स्थानीय सरकारको ठूलो आम्दानीको हिस्सा त्यसै गुम्दैआएको छ ।
बजेट लक्ष्य पूरा गर्न अर्को महŒवपूर्ण हिस्सा ललितपुरमा घरजग्गा करको छ । तर, ललितपुर महानगरपालिकालाई ठूला व्यवसायीहरूले घरजग्गा कर पनि नतिर्दा उनीहरूको बजेट लक्ष्य भने त्यसै असफल हुने सम्भावना बढेको हो ।
नयाँ विमान भित्र्याउँदै निजी वायु सेवा प्रदायक
अदालतको आदेश पछि सडक विस्तार कार्य प्रभावित